Nahatratra dokambarotra hiandany amin’ny Huawei ny orinasa mpanao fikarohana iray · Global Voices teny Malagasy
Novokarinà rindrambaiko ny tarehin'ireo kaonty fako tao amin'ny Twitter.
Voadika ny 26 Febroary 2021 9:19 GMT
Ity tatitra manaraka ity dia nivoaka voalohany tao amin’ny Chinese on the Stand News ny 31 Janoary 2021. Averina avoaka ato amin’ny Global Voices izany, araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Graphika, orinasa mpanao fikarohana amin’ny fandalinam-baovao, dia nahatsikaritra fa misy andiana kaonty fako miezaka manentana ny politikan’i Belgique momba ny 5G mba hiandany amin’ny orinasa Huawei.
Tapaky ny Filankevitry ny Fiarovam-pirenana ao Belgique tamin’ny Jona 2020 fa hisy ireo fepetra famerana ny fampiasàna fotodrafitrasa 5G any an-toerana ho an’ireo mpandraharaha ahiana, ka mety hanakana ny Huawei tsy hahazo hampiasa vola any izany.
Nahasarika ireo haino aman-jery tandrefana ny valim-pikarohana, anisan’izany ny Financial Times sy The New York Times. Vantany vao naharay ny valim-pikarohana ny Twitter dia nofoanany avokoa ireo kaonty fako ireo.
Hitan’ny Financial Times taorian’izay fa mpiasa 6 ao amin’ny Huawei fara-fahakeliny no nahazo mpanaraka maherin’ny 10 000, herinandro vitsy monja taorian’ny namoronany ny kaontiny tamin’ny voalohandohan’ny taona 2020.
Ho valin’izany fikarohana izany, nanambara ny Huawei fa misy ny fanadihadiana anatiny mba hamantarana raha “nisy fitondràntena tsy mendrika.”